नेपाल राहत शिक्षक संघठनद्वारा वृहत ¥याली सहित चर्को आन्दोलन,( भिडियो सहित ) « Kalakhabar
नेपाल राहत शिक्षक संघठनद्वारा वृहत ¥याली सहित चर्को आन्दोलन,( भिडियो सहित )
प्रकाशित मिति : आईतवार, २१ आश्विन २०७५ १७:४२
कलाखबर संवाददाता,२१,असोज–काठमान्डौ । नेपाल राहत शिक्षक संघठनले आईतबार वृहत जुलुस सहित आन्दोलन चर्काएका छन् । आस्थायी राहत शिक्षकलाई स्थायी गर भन्ने मुल नाराका साथ देश भरका शिक्षकहरु एकै साथ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । माईतीघर मन्डलाबाट सुरु भएको सो ¥याली नया बानेश्वरमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएका थिए ।
साभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय संगठनका अध्यक्ष खेमराज अधिकारिले यो आन्दोलन कुनै काष्टिङ मात्र भएको बताउनु भयो । यत्रो जनसागर सडकमा उत्रिएर निकालिएको आवाज पनि सरकारले नसुने अब अर्को आन्दोलनमा देश भरका चालीस हजार शिक्षहरु फेरि सडकमा उतार्ने चेतावनी दिनु भयो ।
कथमकदापी माईतीघरबाट सुरु गरि बानेश्वर सम्म उर्लेर आएको आवाजलाई सरकारले नसुने निषेधित क्षेत्र तोड्ने मात्र होईन, पुलिसको बन्दुकले पनि रोक्न नसक्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले आफूहरुसँग मास्टर डिग्री पि. एच.डी. सम्मको सर्टीफिकेट र चौध वर्ष सम्मको कार्य अनुभव भएको र त्यसलाई वर्तमान सरकारले अपमान र तिरस्कार गरेको पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्षले उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दागर्दै हतार हतार शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आवहान गर्दै पत्र काटेर सभा स्थलमा नै पठाएका थिए । सात वटै प्रदेशबाट कमान्ड गर्दै आएका जिल्ला अध्यक्षहरुले पत्र आउदैमा खुशी रहने अवस्था नभएको बताएका थिए । मन्त्रालयबाट पत्र आउदैमा हामी खुशी हुदैनौ, माग पुरा नभए हामी यस पालिको दशै पनि सँगै सडकमै मनाउछौ भन्ने धारणा सबैले राखेका थिए ।
मन्त्रलायबाट सोम्बारका लागी बार्तामा आउन आवहान गरिए पनि सीमित व्यक्तिहरु मात्रै जाने र बाँकी सबै बिहान आठ बजेबाटै फेरि आन्दोलनमै उत्रिने कार्यकम रहेको श्री वाल बिकास मा.वि. नर्गाजुन १ काठमाण्डौका शिक्षक रामनाथ पोख्रेलले कलाबरलाई जान्कारी दिनु भयो । देश भरका जिल्लाहरुबाट आएका शिक्षक शिक्षीका गरि करिब पाँच हजारको हाराहारीमा आन्दोलनकारीहरु रहेका थिए ।